Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Nzaghachi gọọmentị maka COVID-19 Delta na-emerụ mgbake njem ụgbọ elu » Page 3
China 'Okporo ụzọ ụlọ dara 57.0% ma e jiri ya tụnyere Ọgọstụ 2019 - nnukwu mbibi site na ọdịda 2.5% na July. Agbanyeghị, ikpe n'ozuzu ya pere mpe, a na -achịkwakwa ọrịa na -efe efe na njedebe nke August, na -atụ aro na ọnụ ọgụgụ ga -aka mma na Septemba.
India 'Ụgbọ njem ụgbọ ala gbanwere omume ahụ, ebe ọ bụ na ọnụ ahịa dara 44.8% na Ọgọstụ, ọ dị mma site na mbelata 58.9% na July na July 2019, n'ihi ọnọdụ dị mma n'okwu ọhụrụ yana ịgba ọgwụ mgbochi.
“Mbelata ngwa ngwa na mgbake okporo ụzọ ụlọ na August, n'ihi mmụba dị na Delta dị iche iche na-egosi otú njem ụgbọ elu ekpughere si aga n'ihu na usoro nke COVID-19. Maka gọọmentị nke kwesịrị izipu ozi abụọ. Nke mbụ bụ na nke a abụghị oge ịpụ na nkwado ụlọ ọrụ na -aga n'ihu, ma ego na usoro iwu. Nke abụọ bụ mkpa itinye usoro dabere n'ihe ize ndụ maka ijikwa ókèala, ebe ndị njem na-emela mkpebi mkpebi njem ha, " Walsh.
N'izu na -abịa, ndị isi mpaghara ụgbọ elu ụwa niile ga -ezukọ na Boston na 77th obodo ntà Nzukọ Ọgbakọ Kwa Afọ (AGM) na Mgbakọ ụgbọ elu ụwa, 3-5 Ọktoba. “AGM na -enye ntuli aka siri ike na nchekwa nke njem ụgbọ elu mba ofesi yana usoro ahụike dị ugbu a ruo ọnwa 18. Ekwuru m ya na mbụ: nzukọ nzuzu anaghị anọchi anya uru a na-enye site na ohere izute ihu na ihu. AGM ga -enye ncheta siri ike maka eziokwu a. ”